Banyere Anyị - Ningbo Boyu Waterproof Ihe Co., Ltd.
Ningbo Boyu waterproof ihe onwunwe Co., Ltd.
Ningbo Boyu waterproof ihe onwunwe Co., Ltd.A ọkachamara emeputa nke bụ nnyocha na mmepe, productionand ahịa na otu ụlọ ọrụ. emi odude Chongshou ulo oru ebe nke Cixi Ningbo, na-adaba adaba njem ohere.
Main ngwaahịa polyurethane grouting ụfụfụ, waterproof akpụkpọ ahụ, grouting injection kpọọ, grouting mgbapụta, griiz nipples na kwa akụkụ. Ike 120,000,000 iberibe ogwu ite, All anyị ngwaahịa soro mba àgwà ụkpụrụ na na-ekele dị ukwuu na a iche iche nke dị iche iche na ahịa n'ụwa nile.
Kpamkpam watertight, àgwà bụ omenala anyị. ahaziri iji OEM ọrụ. Anyị ji obi ụtọ na-anabata ajụjụ gị maka mmekọrịta azụmahịa ogologo oge, mmepe mmekọrịta, uru ọ bụla.
Anyị na-elekwasị anya na-emepe emepe elu-edu ngwaahịa maka n'elu-ọgwụgwụ markets.Our ngwaahịa na-na akara na mba ụkpụrụ, na na-tumadi exported na Europe, America, Japan na ndị ọzọ na-aga gburugburu ụwa.
Anyị nwere ndị ọrụ R & D siri ike, anyị nwere ike ịzụlite ma mepụta ngwaahịa dịka eserese ma ọ bụ ihe atụ ndị ahịa nyere.
Anyị nwere ụlọ ọrụ nke anyị .Ya mere anyị nwere ike ịnye ọnụahịa na ngwaahịa ozugbo.
Anyị nwere mmepụta akara maka ogwu ite, na ọgwụ mgbapụta igwe. nakwa akụkụ. Polyurethane ụfụfụ na mmiri na-ekpuchi akpụkpọ ahụ.
Anyị kwa afọ mmepụta ike karịrị 80,000,000, PC .anyị nwere ike izute mkpa nke dị iche iche ndị ahịa dị iche iche zuo ibu.
Kemgbe ọtụtụ afọ, na ike ike oru, elu-edu na tozuru okè na ngwaahịa, na zuru okè ọrụ usoro, anyị na-enweta ngwa ngwa mmepe, na teknuzu index na bara uru mmetụta nke ya ngwaahịa e n'ụzọ zuru ezu kwenyere na too nke ọtụtụ ndị ọrụ, na nwetara akwụkwọ nke ngwaahịa dị elu, ma ghọọ ụlọ ọrụ a ma ama na ụlọ ọrụ ahụ.
N'ọdịnihu, ụlọ ọrụ ahụ ga-anọgide na-enye egwuregwu zuru oke na uru nke ya, na-agbaso ụkpụrụ nke "na-eduga na sayensị na teknụzụ, na-eje ozi n'ahịa, na-emeso ndị mmadụ iguzosi ike n'ezi ihe ma na-agbaso izu okè" na nkà ihe ọmụma ụlọ ọrụ nke "ngwaahịa bụ ndị mmadụ ", na-arụpụta ihe ọgbara ọhụrụ na teknụzụ, ihe nrụpụta ngwa ọrụ, ihe ọrụ na usoro njikwa ihe ọhụụ, yana na -emepụta ngwa ahịa ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ iji gboo mkpa maka mmepe n'ọdịnihu. Site na imeputa ihe ohuru iji mepee ngwa ahia ndi ozo karie iji gboo mkpa nke oganihu di n'ihu, na inye ndi ahia ngwa ngwa, ihe di ala di ala bu n 'azu anyi.